डिसेम्बर 19, 2009 द्वारा Ofer7प्रतिकृयाहरु
TransPosh लागि नयाँ सुविधाहरू काम समयमा, हामी जो हामीले ठीक सक्छ समस्या ठोकर छ. मुद्दा यो साइट स्क्यानिङ धेरै Bots खुट्टामीटर संग पृष्ठ स्क्यान थियो “replytocom” जो एकदम बेकारी छ. जाहिर – यो बेकारी प्यारामिटर अन्तिम मा यो साइट यातायात को 2GB भन्दा कारण छ9महिना.
हामी कोड को केही रेखाहरू निकाल्न र यो फिक्स जो एक प्लगइन सिर्जना गर्न स्वतन्त्रता लिएका छन्. अब उपलब्ध यस WordPress प्लगइन निर्देशिका.
यस WordPress साइट बारेमा सानो rant, प्लगइन लागि मतदान अज्ञात छ देखि, प्लगइन कसैले तल मतदान भएको थियो, जो हामी जो थाहा कुनै तरिका छ त्यो (त्यो वा) छ. हामी विचार गर्न सक्छौं कुनै पनि कारण संग छैन (जे भएपनि, निःशुल्क प्लगइन, विशिष्ट समस्या समाधान गर्न, कुनै मनसाय साथ, जो सिर्फ काम गर्दछ). हामी उहाँलाई हाम्रो हात राख्नु छौँ भने…. 🙂
न्यून दायर: सामान्य संदेश संग Tagged: replytocom, WordPress प्लगइन
डिसेम्बर 19, 2009 मा 5:32 साँझ
डिसेम्बर 19, 2009 मा 5:42 साँझ
डिसेम्बर 19, 2009 मा 5:44 साँझ
डिसेम्बर 19, 2009 मा 6:20 साँझ
जुलाई 28, 2010 मा 6:40 साँझ
जुलाई 28, 2010 मा 7:05 साँझ
जुलाई 28, 2010 मा 7:08 साँझ